६ महीनामा एक अर्ब ३६ करोड बराबरको तरकारी तथा फलफूलमा कारोबार | Artha News Nepal
Home	कृषि	६ महीनामा एक अर्ब ३६ करोड बराबरको तरकारी तथा फलफूलमा कारोबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतले चालू आव २०७७/७८ को ६ महीनामा तरकारी तथा फलफूलमा रू. एक अर्ब ३६ करोडको कारोबार गरेको छ ।
त्यसैगरी निर्यातित वर्षे तरकारी एक लाख ६६ हजार ४६१ क्विन्टलबाट रू. ५३ करोड २६ लाख ७५ हजार २००, हिउँदे आलु २७ हजार ६७५ क्विन्टलबाट रू. १२ करोड ७३ लाख पाँच हजार, हिउँदे तरकारी १७ हजार ५४८ क्विन्टलबाट रू. पाँच करोड २६ लाख ४४ हजार र सुन्तला पाँच हजार ८५६ क्विन्टलबाट रू. तीन करोड ८० लाख ६४ हजार बाह्य कारोबार भएको अर्थविज्ञ थापाले बताए ।